यी हुन् पौने करोडको कार चढ्ने नेपालि हिरो, कुन कलाकारले कुन गाडी चढ्छन् ? – List Khabar
Home / मनोरंजन / यी हुन् पौने करोडको कार चढ्ने नेपालि हिरो, कुन कलाकारले कुन गाडी चढ्छन् ?
admin November 28, 2021 मनोरंजन Leaveacomment 88 Views
महँगो कार चढ्ने पुष्प पहिलो कलाकार होइनन् । उनी भन्दा महँगो कार चढ्ने थुप्रै अभिनेताहरु पनि यहाँ छन् ।पछिल्लो पुस्ताका चर्चित अभिनेता अनमोल केसी महँगो कार चढ्ने अभिनेताको अग्रपँक्तिमा छन् । एक पछि अर्को हिट सिनेमा दिँदै आएका अनमोलले जीप कम्पनीको कम्पास जीप चढ्दै आएका छन्।
यतीबेला यी अभिनेताले पनि कियाकै स्पोटिज कार चढ्ने गरेका छन् ।कियाको स्पोटिज कार चढ्ने अर्का अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशी पनि हुन् । उनले यो कार आफ्नै कमाईले किनेको बताउछन् । त्यसो त आयुष्मानसँग मर्सिडिज कार पनि छ । तर यो उनको परिवारको कार हो।
Previous विवाहको पहिलो रात दुलहीले श्रीमानको यस्तो देखेपछि चालिन यस्तो कदम दुनिया चकित
Next अन्तर्वार्तामै हिरोईनहरुको ठुलो झगडा । हात हालाहालको अवस्था, निर्देशक छुट्टाउन नै आए (भिडियो हेर्नुस)